Winpal: N'ogbe Label Ma Nnata Printer, Oem WiFi Printer
4 INCH LABEL E Bipụtara
WP300A 4 ″ Kwes Printer
WPLB80 80mm Kwes Label Printer
WP80B 80mm Kwes Lable Printer
WP80L 3 ″ Kwes Label Printer
WPLB58 58mm Kwes Label Printer
WP300W 3 ″ Kwesgwọ Nnata Onye na-akwụ ụgwọ
WP260 80MM Kwes Nnata Printer
WP230C 80mm Kwes Nnata Printer
WP260K 80mm Kwes Nnata Printer
WP230F 80mm Kwes Nnata Printer
WPCB58 58mm Kwes Nnata Printer
WP-T2A 58mm Kwesara Nnata Printer
WP-T3K 58mm Kwesie Nnata Printer
WPB58 58mm Kwes Nnata Printer
WP-T2C 58mm Okpu nnata Printer
WP-T2B 58mm Kwesiri Lable Printer
WP-Q2B 58mm ngwa nbipute
WP-Q2A 2inch Kwesiri Okpu Igwe Mbupu
Soro ndị ahịa kwukọrịta ihe ndị ahịa chọrọ.
Injinia depụtara atụmatụ ahụ ma kwado ya na onye ahịa ya. Ọ bụrụ ngbanwe dị mkpa, injinia anyị ga-agbanwe ma gosipụta ya ọzọ.
Nhazi nne na imewe
A ga-eme nlele ahụ ka anyị nwetachara ikike na imewe ahụ gosipụtara.
Guangzhou Winprt Technology Co., Ltd. ọkachamara na nyocha, mmepe na mmepụta nke ndị na-ebipụta akwụkwọ: onye na-ebipụta akwụkwọ ọkụ, onye na-ebipụta akwụkwọ na onye nbipute a na-ebugharị ihe karịrị afọ 10. Anyị nọ ugbu a na Nansha Pilot Free Trade Mpaghara nke Guangzhou City na a pụrụ iche adaba mbubata na mbupụ njem ohere.
Ngwaahịa anyị niile na-agbaso ụkpụrụ ogo mba ụwa ma nweta CCC, CE, FCC, Rohs, BIS asambodo maka nchekwa.Our factory nwere ihe karịrị ndị ọrụ 700 na ndị ọrụ R&D 30 nke ọma na usoro mmepụta nke ọma nwere ike ịchịkwa nkwarụ ọnụego nke ngwa nbipute ihe na-erughị 0.3% .N'ihi nsonaazụ nke ngwaahịa na ngwaahịa a pụrụ ịdabere na ya, anyị nwere ike ịnye ọrụ OEM na ODM maka mkpa ndị ahịa dị iche iche ma zute ndị ahịa afọ ojuju.
Nrụrụ adịghị mma
N'oge a, a na-eji ndị na-ebi akwụkwọ ọkụ na-agbasawanye ebe niile, na-enwekwa ọtụtụ ọrụ. Ya mere, nke na-ebi ọkụ ọkụ dị mma maka gị? E nwere ọtụtụ ụdị na ọrụ dị iche iche nke ndị na-ebi akwụkwọ n'ahịa maka ịhọrọ, ụfọdụ maka akwụkwọ nbanye, ụfọdụ maka akwụkwọ nbipụta, na ụfọdụ maka ...
Gịnị Ka Anyị Kwesịrị Ime Mgbe Barcode Printer Nọgidere Na-ebipụta Akwụkwọ Na-adịghị Achara
Mgbe ị na-eji akwụkwọ nbipute ihe eji ebi akwụkwọ maka ibipụta, bipụta akwụkwọ mpempe akwụkwọ oghere ụdị nsogbu a bụ nsogbu nkịtị. Karịsịa na akara ngosi ihe ọkụkụ mgbe ị gbanwechara akwụkwọ akara ma ọ bụ eriri carbon, akara nbipute dị nnọọ mfe ịwụ elu ma ọ bụ nsogbu nke ọtụtụ akwụkwọ oghere, na ...
1. workingkpụrụ ọrụ nke onye na-ebi akwụkwọ barcode Barcode ndị na-ebi akwụkwọ nwere ike kewaa ụzọ abụọ ebi akwụkwọ: igwe nrụpụta ọkụ na ntụgharị mbufe ọkụ. (1) Direct thermal ebi akwụkwọ Ọ na-ezo aka okpomọkụ eme mgbe ebipụta isi na-ewe iwe, nke na-agafere kwes akwụkwọ ...
Akụkọ ihe mere eme nke onye nbipute bụkwa akụkọ ihe mere eme nke teknụzụ dị elu na ụlọ ọrụ. Kemgbe afọ ndị 1970, laser, inkjet, mbipụta mmiri na teknụzụ ndị ọzọ na-enweghị mmetụta apụtawo ma jiri nwayọọ nwayọọ tozuo. A na-eji usoro ndekọ okpomọkụ nke isi ebipụta mee ihe na faksị mach ...
Nnata Printer, Nnata Mobile Printer, 80mm Kwesie Nnata Printer, Onye na-ebipụta ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa, Onye na-ahụ maka nnata ihe ntanye 80mm, Wifi Receipt Printer,